Omunye ngempumelelo ejenti elwa namagciwane ukusetshenziswa ngezihloko ezihlukene, okuqondene iqembu fluoroquinolones nokunikeza eqeda ukuvuvukala, elwa namagciwane, Lentulo, umphumela izinzwa lwasendaweni wamafutha "Oflomelid". Izibuyekezo mayelana izidakamizwa, iziguli kwesokunxele ikakhulukazi omuhle. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe ngale ithuluzi, esixoxe ngawo esihlokweni.
Ngo 1 g "Oflomelid" wamafutha iqukethe:
ofloxacin - 10 mg;
lidocaine hydrochloride - 30 mg.
Kusho nezinsizasenzo yilezi: macrogol 400 (ongaphakeme isisindo yamangqamuzana polyethylene glycol 400, i-polyethylene 400), macrogol 1500 (ongaphakeme isisindo yamangqamuzana polyethylene glycol 1500, i-polyethylene 1500), methyl parahydroxybenzoate (methyl paraben noma Nipagin), propylene glycol, propyl parahydroxybenzoate (Nipasol noma propylparaben).
Wamafutha "Oflomelid» iqukethe izinto babe miphumela elandelayo:
Ofloxacin - ephumelelayo ejenti elwa namagciwane nge spectrum ezibanzi yesenzo. Ngosizo lwawo ivinjiwe gyrase DNA amaseli virus. Into asebenzayo ngokumelene ezihlukahlukene nezilwanyana ezincane: intracellular, Gram-negative futhi Gram-HIV.
Methyluracil - into okuyinto zishukunyiswa isenzo kwezicubu ukulungisa. Ngaphansi ithonya lakhe, kuyashesha cell ukuvuselelwa ezicutshini, izicubu ukukhula, nokuvuthwa granulation yayo, epithelialization.
Lidocaine - possesses izinzwa umphumela ngakini eyabangelwa nokuvinjelwa Na + -channels, kuvimbela isizukulwane pulses ku eziyimpumelelo sezinzwa kubavikela ekwenzeni izinzwa. Ukuthola izinhlelo zokusebenza ongaphandle izidakamizwa dilates emithanjeni yegazi nasemasosheni ngaphandle kokudala isinyathelo kuyacasula wendawo.
Wamafutha "Oflomelid" (yokusetshenziswa uzobe kuchaziwe ngezansi) asetshenziswe amanxeba ukonakala of omsakazo ezahlukene kanye kwasendaweni esikhathini pyo-necrotic of isilonda sisheshe siphole, kuhlanganise ngesikhathi wawubona ubuhlungu syndrome. Izinkomba ngoba ukusetshenziswa nomuthi yilezi:
ukusha onegciwane (2-4 degree);
izilonda ukucindezeleka kwangemva kwenhlekelele nangemuva-operative futhi fistulae;
amanxeba ngemuva ukususwa kuhlinzwa ka carbuncles, amathumba, lipomas, iqhubeka atheroma, gidradenity, abscesses, abscesses.
Nokho, ukwenza akazibekanga medicate, kungaba nomthelela empilweni yakho. Ukusetshenziswa kwanoma yiziphi izidakamizwa, "Oflomelid" izidakamizwa kuhlanganise isiqalo kuphela emva kokubonisana onguchwepheshe.
Labo iziguli osebenzise wamafutha "Oflomelid" Izibuyekezo ikakhulukazi omuhle kwesokunxele. Baphawula ukuthi izidakamizwa:
ngempela akanalo nje kokuzalwa, kodwa futhi isenzo elwa namagciwane;
isilonda uphulukisa ngesikhathi esifushane;
ngempumelelo aqede ukuvuvukala futhi aqede ubuhlungu;
Wamafutha "Oflomelid": yokusetshenziswa
Sebenzisa izidakamizwa ngokwezihloko, izikhathi 1 usuku okungenani amaviki 1-2. Amanxeba betshisa ekuqaleni licubunguliwe indlela evamile, khona-ke isicelo ngqo wamafutha isilonda ebusweni "Oflomelid" mncane ungqimba phezulu futhi embozwe ngebhandeshi oyinyumba. Kusho singasebenza ngebhandeshi gauze futhi zisebenza isikhumba abathintekayo. Ngemva ukuhlanzwa kuhlinzwa amanxeba purulent tampons afuthwe ngesibulali amafutha kanye alengayo kugcwaliswe umgodi e amapheshana iqondiswa wamafutha turundy.
Lapho iqhubeka amanxeba ukwelapha "Oflomelid" lisetshenziswa 1 isikhathi ngosuku, ukusha (kuye ngokuthi inani ubomvu) ukusetshenziswa imithi udokotela nsuku zonke noma izikhathi 2-3 kuphela ngesonto. Umthamo esiphezulu zomuthi ngelanga - 100 g
Ubude yokwelashwa kuthinta Dynamics lokuhlanjululwa nilimaza kusukela ubovu okuqukethwe kanye isikhathi ngempumuzo ukuvuvukala.
Izidakamizwa "Oflomelid" (wamafutha): nozakwabo
Kuze kube manje, analogue isakhi izidakamizwa ngalolu ketshezi esebenzayo esifanayo, akekho. Buyisela imithi kuzosiza udokotela, ngiphakamisa imithi nezinye izithako ezisebenzayo, kodwa ezifanayo kodwa ngesikhathi esifanayo. Lokhu kungafaka izidakamizwa ezilandelayo: "Viton", "Vankotsin", "Xymedon", "Desitin", "Stellanin", "Lemod".
Wamafutha "Oflomelid" kungaba baxabane nomzimba. Izidakamizwa ukuthi awunayo i side effect emzimbeni, cishe non-akukho. izigameko ezingezinhle ezavela kwenza babe uma usebenzisa umthamo esiphezulu nomuthi, ukusetshenziswa kwezidakamizwa isikhathi eside, abaphathi kanyekanye izidakamizwa eziningana. Kungenzeka futhi isici esiyingqayizivele ethize izidakamizwa ingxenye. Uma noma yimuphi ukuphambuka kusuka kuyinsakavukela kuyadingeka ukuze ngokushesha ayeke ukudla izidakamizwa futhi xhumana nodokotela okunye ukwelashwa.
Amacala ukweqisa izidakamizwa nale izidakamizwa sezihlonziwe kuze kube manje. Yaziwa amacala izidakamizwa ukuxhumana "Oflomelid" nezinye izidakamizwa ukuthi ziye zabangela ukuba ukwehla ukuphepha nokusebenza ngempumelelo imithi.
Wamafutha "Oflomelid" ayikwazi ukusetshenziswa izingane nentsha engaphansi kwengu-18 ubudala, kanye:
ukuzwela anda ukuze izindlela ezahlukahlukene.
imithi eminingi kungabangela imiphumela emibi embungwini ngisho imbangela kombungu wengane ongakazalwa. Phuza umuthi ubisi ufake umzimba futhi kuthinte umntwana kuso. Ngenxa yalesi sizathu, abesifazane abakhulelwe abesifazane lactating ukusebenzisa izidakamizwa kumelwe siqaphele ikakhulukazi kuphela ngokulandela isincomo udokotela ukuba khona.
izimo isitoreji izidakamizwa "Oflomelid"
Umuthi kumele agcinwe endaweni uvikelekile elangeni futhi aphume kude nezingane, ezingeni lokushisa akukho ephakeme kuka 15-20 ° C. Dlulisa izidakamizwa iminyaka emibili kusukela usuku ukwakhiwa.
Ngisho ngaphansi kwaziphi izimo kufanele usebenzise nemithi ne eshalofini yokuphila yisikhathi. Le mithi ngeke ibe nomphumela efanele zokwelapha, futhi kwezinye izimo kungase kubangele umonakalo ongalungiseki emzimbeni.
Ngakho, singakanani buyisidakamizwa "Oflomelid" (ukhilimu)? Intengo ye amabanga izidakamizwa kusukela $ 100 '30, udayiswa ngumnikezeli enemithi.
Kusukela ukusikeka, ukusha kanye nezinye izilonda zesikhumba, sonke sibhekana. Esimweni esinjalo sekuyisikhathi kubaluleke kakhulu ukuze uqale ukwelashwa ikhambi kahle abakhethiwe. Lokhu kuzoqinisekisa ukuthi alulame ngokushesha kungaphazamiseki. Omunye izinga kwemithi ezivumela isiguli ngesikhathi esifushane ngcono kakhulu isimo, iyona wamafutha "Oflomelid". Izindlela ezinjalo kufanele ibe kit ngamunye. Hlala uphilile!
"Solgar Zinc Picolinate" - imiyalelo, intengo, ukubuyekezwa